पत्याउनु हुन्नहोला ! काठमाडौ उपत्यकामै पाइन्छ यति सस्तो जग्गा ! – AB Sansar
September 26, 2020 September 26, 2020 adminLeaveaComment on पत्याउनु हुन्नहोला ! काठमाडौ उपत्यकामै पाइन्छ यति सस्तो जग्गा !
काठमाडौं – उपत्यकाका ३ जिल्लामध्ये ललितपुरका वि’कट क्षेत्रहरुमा जग्गाको मूल्य निकै सस्तो रहेको मू’ल्याङ्कन प्रतिवेदनले देखाउछ । ३ आनाको घँ’डेरी किन्न काठमाडौंमा करोडौं रकम खर्चिनु पर्छ । ललितपुरको गोटीखेलमा भने प्रति आना १२ सय न्युनतम् मूल्याङ्कन भएको छ । मालपोत कार्यालय गोटीखेल मातहतका क्षेत्रमा तोकिएको यो प्रति आना जग्गाको मुल्य काठमाडौंका होटलमा २ जनाले मासुभात खाए बराबर छ । गोटीखेलसहित गिम्दी, चन्दनपुर, ठुला दुर्लुङ, बुखेल, मानिखेल, शंखु लगायतका गाउँका जग्गाको लागि आव ०७७/७८ को न्यूनतम मु’ल्याङ्कन हो यो । ***** पूरा विवरण को लागि तलको भिडियो लिन्कमा क्लिक गर्नुहोला*****
यो क्षेत्रमा गत आवमा पनि यही मू’ल्याङ्कन थियो । कोभिड-१९ ले सबै क्षेत्रमा अ’सर गरेको भन्दै समितिले जग्गाको मू’ल्यांकन नबढाएको बताएको छ । गोटीखेल क्षेत्रमा सबभन्दा महंगो भनेको रोपनीको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ हो । पिच सडक भएका ठाउँहरुमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रति रोपनी तोकिएको छ भने अरु ठाउँमा रु.२० हजार प्रति रोपनी । यो दरले एक आनालाई १२ सय पर्छ । ललितपुरकै ल’गनखेल, जा’वलाखेल, कु’प’ण्डोल लगायतका क्षेत्रमा प्रति आना ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मू\_ल्याङ्कन गरिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाको पिच सडकले छोएको क्षेत्रमा १२ लाख र बाटो नभएका जग्गाहरु आनाको ७५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । सैँ’बु आवासीय क्षेत्रमा भने १९ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रति आना मू’ल्याङ्कन गरिएको छ ।काठमाडौं का पनि अ’धि’कांश क्षेत्रको जग्ग्ााको मूल्यांकन गत आव कै कायम गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार कम भयो भन्ने गु’नासो आएका क्षेत्रहरुको बढाइएको छ बाँकी क्षेत्रको पहिलेकै मु’ल्यांकन राखिएको छ । ***** पूरा विवरण को लागि तलको भिडियो क्लिक गर्नुहोला*****
अब यसरी हुनेछ एसईई र कक्षा १२ को परिक्षा